August 2014 | OKKALA STORE
Taylor Swift - Shake It Off ,, 12,608,629 views 1 ...
Timor Leste (U21) 1 -3Myanmar (U19)
Myanmar(U19)3- 1 Philippines(U21) Highlights
We Are Big Bag - 2014 CD Album
Myanmar Hot Model ( ချောငယ်ငယ်ဟိန်း ) Photo Album
လန်းချက်က9လောက်ရှိတယ်
(ယူ၂၁) လာအို2-3မြန်မာ (ယူ၁၉)
မြန်မာ3-2ထိုင်း ( ယူ ၁၉)
ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံလူးဝစ်၏ မန်နေဂျာ ဖရင့်မယ်လိုနေက က...
ဖုန်းလာရင် သတိပေးမဲ့ အသံမျိုးစုံ Apk ဖုန်းလာရင် သတ...
ကော်ဖီ ပူပူလေး ဘယ်သူသောက်ချင်လဲ
ကဲ... ဘယ်နုိုင်ငံမှာ ဘာသွားခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြမလဲ ရွေ...
Big Bang အဖွဲ့ထဲက Tae Yang ရဲ့ ( ရက်စက်လိုက်တာ ကော...
Dota2Top 10 Weekly Video ( Dota2ကိုကို များအတွ...
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် Yess Boss ( နေတိုး + သူထူးစံ...
ယနေ့ထွက် မြန်မာဟာသကားသစ် ၀ိညာဉ်များနှင့် ဒန်တန့်တန...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာကားသစ်များ အသက်သွင်း လိပ်ပြာ (...
အရမ်းရဲရင့်တဲ့သူတယောက်ပါ ( Whatabrave man.).
VIDEO: Highlights FC Bayern All Stars3-3Manche...
အရမ်းကိုသဘာဝကျတဲ့ ကာတွန်းလေးပါ ( ကြည့်ရတာတော့မဆိုး...
ဒီနေ့ က ၀တ်မှုံရွှေရည် (ကစ်ကစ်) ရဲ့မွေးနေ့ ပါ Happ...
ဟိဟိဟိ သူ့ ကိုသနားပေမယ့် ရီချင်နေတယ်ကွာ
okkala channel ထဲမှ Chelsea Fan များအတွက် Chelsea ...
♪ VA - အတိတ်ရဲ့ကြေးမုံပြင် (2014) [Album] ♫ ၀၁။...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်း များကို okkalanet တွင...
ဒီတပတ်တွင်း ထွက်သမျှ နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားမျ...
Top 100 Goals 2013 - 2014 HD
ဒီတပတ်တွင်း ထွက်သမျှ မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို...
မေးမေးကြ လွန်းလို့ပါ ကျွန်တော် တို့ okkala net တွင...
Hwayi: A Monster Boy ( ကိုရီးယား ဇာတ်ကြမ်းကားသစ် )...
Godzilla Official Full Movie ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
# ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ...
အမျိုးသားရေး စာအုပ်များအား Gallery ထဲတွင် ပြန်တင်ေ...
FIFA World Cup 2014 All Goals With English Comment...
ညီအကိုတွေအားလုံး သတိအမြဲ ရှိစေရန် ဒီ video ကိုတင်ေ...
The Fox Lover 2014 (Action, Fantasy, Romance)
Need For Speed - Full Movie 2014 (Official)
Gun woman 2014 Full Movie Japanese ( 18 + )
SABOTAGE - Full Movie (2014) [HD] Arnold Schwarzen...
Taylor Swift - Shake It Off ,, 12,608,629 views 1 day ago
Posted by okkala net at 3:47 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 12:23 AM No comments: Links to this post
Album တခုလုံးကို အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသား ဖိုင်အား mp3 slection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာသီချင်းများ ထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည် ( okkala customer များသာ )
Posted by okkala net at 1:37 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 1:22 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 5:06 AM No comments: Links to this post
ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံလူးဝစ်၏ မန်နေဂျာ ဖရင့်မယ်လိုနေက ကယ်လီဟူသော မိန်းမသားဘ၀သို့ပြောင်းလဲတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ရာ အံသြတုန်လှုပ်ကြရ
ဖရင့်မယ်လိုနေကို လင်းနော့ခ်လူးဝစ်ဆိုတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား နာမည်ကျော် ဟဲဗီးဝိတ်လက် ဝှေ့ချန်ပီယံ နဲ့ အတူတွဲသိကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ လူးဝစ်စ်ကို ဗြိတိန်ရဲ့ပထမဆုံး ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံအဖြစ် ဆယ်စုတစ်စုကြာရှိနေအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာ(မြှင့်တင်ရေးမှူး)ဖြစ်နေလို့ပါ။ဖရင့်ကို ခပ်ရင့်ရင့် စကား ပြော တတ်သူအဖြစ်လဲ သိကြပါတယ်။အသက် ၆၁နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖရင့်က သူ့အနေဲ့ ကယ်လီ ဆို တဲ့အမည်သစ်နဲ့ အမျိုးသမီးဘ၀ကိုပြောင်းလဲခံယူလိုက်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တော့ အားလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ် ကုန်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ရှိခဲ့သူ၊ကလေးသုံးယောက်အဖေ ဖရင့်က သူ့အနေနဲ့ကလေးဘ၀ကတည်းက ခန္ဓာကိုယ် မှားဝင်နေမိသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်၊အဲဒါကြောင့် မိန်းမသားဘ၀ပြောင်းလိုက်ဖို့ရဲရင့်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတာ ပါလို့ ဗြိတိန်ထုတ် The Mirror သတင်းစာကြီးနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။
`ကျွန်မဟာ ခန္ဓာကိုယ်အမှားကြီးနဲ့မွေးလာခဲ့သူပါ။ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မိန်းမပဲဆိုတာ အမြဲတမ်းသိထားပါ တယ်`လို့ ကယ်လီတစ်ဖြစ်လဲ ဖရင့်က စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ပြောပါတယ်။
`အမှောင်ရိပ်ထဲမှာ ကျွန်မဆက်မနေနိုင်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့် ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ၀န်ပိသလိုလေးလံဖိ စီးပြီးနေရရင် ကြာရင် ကျွန်မသေလိမ့်မယ်`ဟု သူကပြောပါတယ်။
`မွေးတုန်းကမှားခဲ့တာကို အခု ဆေးပညာနည်းနဲ့အမှန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်မမှာ မိန်းမဦးနှောက်နဲ့ပါ။မိန်းမတွေ ကိုမနာလိုတတ်တယ်လေ`
လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်ကတည်းကစပြီး သူဟာ ဟိုမုန်းကုထုံးနဲ့ လျှို့ဝှက်စွာကုသခံယူခဲ့ပါတယ်။အမွှေးအမြှင်တွေ ကို နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် နှုတ်ခဲ့ရတယ်။အသံကိုကျင့်ခဲ့ရတယ်။ဗြိတိန်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် များအရ မိန်းမလိင်ပြောင်းချင်တဲ့သူဟာ မိန်းမလို (၂)နှစ်ကြာအရင်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့် အခု၂ နှစ်ပြည့် ပြီဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့ လိင်ခွဲစိတ်ပြီး မိန်းမဘ၀ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၁၉၈၉ကနေ ၂၀၀၁အထိ လူးဝစ်ကို ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဖြစ်အောင် မန်နေဂျာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ဖရင့်ဟာ လက်ဝှေ့လောကကနေ အနားယူခဲ့ပါတယ်။
ကယ်လီတစ်ဖြစ်လဲဖရင့်က သူ့အနေနဲ့ ဘယ်အမျိုးသားနဲ့မှ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းနှီးနှောတာလုပ်မှာမလုပ်ဘဲ ကျန် ရှိတဲ့ဘ၀တစ်လျောက်လုံးမှာ တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀နဲ့အရိုးထုတ်သွားမယ်လို့ ပြောကြောင်းပါ။
Posted by okkala net at 4:06 AM No comments: Links to this post
★★ Truck Simulator 2014 – Version: 1.3 Apk (Android Game) ★★
android ဖုန်းတွေမှာ Truck ကားအကြီးကြီးတွေမောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် Truck Simulator 2014 – Version: 1.3 Apk up date လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေးကတော့မြို့ထဲတွေ
ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးတွေ Truck ကားအကြီးကြီးတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်မောင်းနေသလိုခံစားရပါလိမ့်မေ
မှာပါ ။ file size က 33mb ရှိပြီး Android: 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာကစားနိုင်ပါတယ် ။
Posted by okkala net at 3:53 AM No comments: Links to this post
♪ Plants vs. Zombies™2v2.5.1 Mod [Unlimited Everything] ♫
Plants vs Zombies Game ကတော့ PC ရော Android မှာပါ နာမည်ကြီးတဲ့ Game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။ အခု Latest Version လေးထွက်လာလို့တင်ပေးထားပါတယ်။ Hack ထားပြီးသား Game လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘော်ဒါတွေကြိုက်ကြမှာပါ။ Game ကိုစိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကျွန်တော် လည်း Plants vs Zombies Game လေးကိုသဘောကျပြီး တစ်ခါတစ်လေ ပျင်းရင်ကစားဖြစ်တယ်ဗျာ။ အတော်လေးတော့ ကစား လို့ကောင်းတဲ့ Game လေးပါဗျာ။ နမူနာအနေနဲ့အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Posted by okkala net at 3:49 AM No comments: Links to this post
To Download ....https://my.pcloud.com/publink/show?code=wIf
Posted by okkala net at 3:28 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:19 AM No comments: Links to this post
ကဲ... ဘယ်နုိုင်ငံမှာ ဘာသွားခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြမလဲ ရွေးးး
၁။ သွားတု - ထိုင်းနိုင်ငံ
၂။ နှာခေါင်း - ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
၃။ ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား - ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
၄။ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာကပ် - ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။ သွားအစားထိုး - ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ
၆။ တင်ပါးပင့်တင် - တူရကီနိုင်ငံ
၇။ ၀မ်းပျင်းသား ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက် - ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ
၈။ ဆံပင်အစားထိုး - တူရကီနိုင်ငံ
၉။ ရင်သားအစားထိုး - ပိုလန်နိုင်ငံ
၁၀။ သားဥလှူ (လိင်ဆက်ဆံမှုမဲ့ သန္ဓေဆောင်) - ဂရိနိုင်ငံ
၁၁။ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုမရှိ သားလောင်းကိုရွေးချယ် ကြိုတင်ရွေးချယ်စိစစ်ထုတ်ခြင်း - ဂရိနိုင်ငံ
၁၂။ အ၀လွန်ခွဲစိတ်ကုထုံး - အိုက်ယာလန်နိုင်ငံ
၁၃။ သွားအခေါင်းပေါက်ဖာ - ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ
၁၄။ သွားထိန်းကြိုးတပ် - ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ
၁၅။ အစာအိမ်တွင်းဘောလုံးထည့်ပြီး အစာအိမ်ချုံ့ - ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ
Big Bang အဖွဲ့ထဲက Tae Yang ရဲ့ ( ရက်စက်လိုက်တာ ကောင်မလေး )
Posted by okkala net at 2:41 AM No comments: Links to this post
Dota2Top 10 Weekly Video ( Dota2ကိုကို များအတွက် )
Posted by okkala net at 12:18 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် Yess Boss ( နေတိုး + သူထူးစံ + ထွန်းထွန်း + မိုးဟေကို + စိုးမြတ်သူဇာ)
Full Movie ကို okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 11:47 PM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာဟာသကားသစ် ၀ိညာဉ်များနှင့် ဒန်တန့်တန် ( ခန့်စည်သူ + ခိုင်သင်းကြည် + ခင်လှိုင် )
Download ဆွဲပြီးသား Full Movie ကိုတော့ okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာကားသစ်များ အသက်သွင်း လိပ်ပြာ ( ဇေရဲထက် + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် )
Full Movie ကို okkala မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 11:26 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 9:55 PM No comments: Links to this post
VIDEO: Highlights FC Bayern All Stars3-3Manchester United Legends ( 10.8.2014 ) BAYERN MUNICH LEGENDS3(Paulo Sergio 10, Elber 21, Zicker 38) MAN UNITED LEGENDS3(Cole 9,83 Scholes 26)
Posted by okkala net at 9:47 PM No comments: Links to this post
အရမ်းကိုသဘာဝကျတဲ့ ကာတွန်းလေးပါ ( ကြည့်ရတာတော့မဆိုးပါဘူး )
Posted by okkala net at 9:30 PM No comments: Links to this post
ဒီနေ့ က ၀တ်မှုံရွှေရည် (ကစ်ကစ်) ရဲ့မွေးနေ့ ပါ
Happy Birthday Kit Kit
Posted by okkala net at 3:51 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:46 AM No comments: Links to this post
okkala channel ထဲမှ Chelsea Fan များအတွက် Chelsea 2-0 Fenerbahce Full Highlight (Friendly Match )
♪ VA - အတိတ်ရဲ့ကြေးမုံပြင် (2014) [Album] ♫
၀၁။ ချစ်မိခြင်း - အိမ့်ချစ်
၀၂။ ကြွေ - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
၀၃။ အတိတ်ရဲ့ကြေးမုံပြင် - Rဇာနည်
၀၄။ ခွဲမသွားနဲ့အဝေး - ရှင်ဖုန်း
၀၅။ တစ်ချိန်တစ်ခါဆီ - စည်သူလွင်
၀၆။ နွေရွက်ကြွေလေးများနှင့်အတူ - နေနေ
၀၇။ နှောင်းနောင်တ - ဇော်ပိုင်
၀၈။ လူငယ့်အားမာန် - Super Group
၀၉။ အရိပ်တကြည့် - နေစည်ဗဆွေ
၁၀။ လေလွင့်သစ္စာ - ဂရေဟမ်
၁၁။ ယူလိုက်နော် - Nကိုင်ရာ
၁၂။ အပြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါရင် - အစ္စဏီ
၁၃။ မင်းသိအောင် - သီရိစံ
၁၄။ အမောသက်ပြင်းများ - နီနီခင်ဇော်
အောက်ပါလင့် တွင် download ယူနိုင်ပါသည်
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်း များကို okkalanet တွင် တင်ပေးထားပါတယ်
Mp3 Selection ထဲတွင် ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်
ဒီတပတ်တွင်း ထွက်သမျှ နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို okkala net တွင် တင်ပေးထားပါတယ်
နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသား video ကို okkala sport channel ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ဒီတပတ်တွင်း ထွက်သမျှ မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို okkala net တွင် တင်ပေးထားပါတယ်
မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
မက်လုံး (မြင့်မြတ် + ခိုင်သင်းကြည် )
သက်မဲ့ ဘ၀ (လူမင်း + အိန္ဒြာကျော်ဇင် + မေ့မြင့်မိုရ်)
အချစ်ရဲ့ တန်ခိုးများ( မြင့်မြတ် + အောင်လ + နန်းစုဦး)
အရုပ်ကလေးကို ကျွန်တော်ပြန်မပေးပါ (နေတိုး + ဖွေးဖွေး )
အဝေးကွင်း ( ကျော်ကျော်ဗိုလ် + သဲနော်ဇာ + ခိုင်နှင်းဝေ )
Posted by okkala net at 4:23 AM No comments: Links to this post
မေးမေးကြ လွန်းလို့ပါ ကျွန်တော် တို့ okkala net တွင် Video , Mp3 , EBOOK , Phone App , Music VCD များကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု့နိုင်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ထိုင်သည့် စက်တိုင်းတွင် ထည့်ပေးထားပါသည်။ okkalanet.blogspot.com မှာ လူကြီးမင်းတို့ အသစ်ထွက်သမျှ Video , Mp3 , EBOOK , Phone App , Music VCD , သတင်းများကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေရန် ကြော်ငြာပေးရုံသက်သက်ပါ
Hwayi: A Monster Boy ( ကိုရီးယား ဇာတ်ကြမ်းကားသစ် ) မြန်မာစာတန်းထိုး Full Movie
Full Movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Full Movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိင်ပါသည်
# ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Universe Myanmar 2014 Beauty Pageant -7Minute Highlights #
Posted by okkala net at 2:09 AM No comments: Links to this post
အမျိုးသားရေး စာအုပ်များအား Gallery ထဲတွင် ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်
အောက်ပါလင့်များမှ တဆင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်
Posted by okkala net at 1:08 AM 1 comment: Links to this post
Posted by okkala net at 10:55 PM No comments: Links to this post
FIFA World Cup 2014 All Goals With English Commentary - Part 1/3
fifa world cup 2014 ဂိုးများအားလုံး ကို okkala sport channel ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
♪ KHANT PHYO (ခန့်ဖြိုး) - ဖြစ်ချင်အုံးဟဲ့မျောက် (2014) [Album] ♫
၀၁။ ဖြစ်ချင်အုံးဟဲ့ မျောက်
၀၂။ ခေး (Acoustic)
၀၅။ Whenever I
၀၆။ Not My Destination
ညီအကိုတွေအားလုံး သတိအမြဲ ရှိစေရန် ဒီ video ကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
လှိုင်သာယာမြို့ နယ် လဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်းမှာ ရန်ဖြစ်ပြီး လူသတ်မှု
9 -6- 2014 ရက်က လှိုင်သာယာမြို့ နယ် လဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်းမှာ ရန်ဖြစ်ပြီး လူသတ်မှု့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ ။
Posted by okkala net at 9:36 PM No comments: Links to this post
မြန်မာစာတန်းထိုး Full Movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:29 AM No comments: Links to this post
SABOTAGE - Full Movie (2014) [HD] Arnold Schwarzenegger
Posted by okkala net at 12:10 AM No comments: Links to this post